Ilay mpilalao sarimihetsika mitovy amin'izany dia ao amin'ny 'Elf' & 'A Christmas Story' - News
Celeb Look Gynaec Iraisam-Pirenena Anontanio The Expert #actagainstabuse Fitaizana Vaovao Momba Ny Lamaody Lakozia Maharitra Ao An-Tokantrano Asa Sy Vola
'Tantaran'ny Noely' sy 'Elf' dia misy itovizany (ary mivoaka ny Internet)
MGM / UA Entertainment Co./New Line Cinema
Tianay ny atody paska amin'ny sinema - indrindra raha mikasika ny roa amin'ny sarimihetsika Krismasy ankafizinay indrindra. (Holiday puns.) Ary ahoana ny amin'ny internet sy ny rehetra, tsy mila mijery lavitra isika. Indro:
Androany, tokony ho tamin'ny 11:19 maraina, niova mandrakizay ny fiainako rehefa hitako fa io lehilahy io avy amin'i Elf koa dia Ralphie avy amin'ny A Christmas Story pic.twitter.com/kBVj4fE2RV
? Ramiarisoa (@miarisoa) 29 Novambra 2018
Tantara Krismasy + Elf = tsofina ny saina.
Ilay mpilalao sarimihetsika, Peter Billingsley, 47 taona, dia malala indrindra noho ny filalaovany an'i Ralphie Parker te-hanana basy-basy tamin'ny kilalao fialantsasatra 1983 Tantara Krismasy . Raha jerena fa mijery ny endriny mandritra ny 24 ora eo ho eo isaky ny 25 Desambra isika, dia gaga izahay fa tsy nahafantatra azy ho toy ny elf miseho milomano ao amin'ny * vaovao * kilasika Elf . (Ho fiarovana anay dia tsy voamarina ny andraikitra.)
Hay i Billingsley dia zava-dehibe amin'ny filma krismasy, rehefa avy niseho koa EFATRA Krismasy miaraka amin'i Reese Witherspoon sy Vince Vaughn. Oh eny, ary mpamokatra Hollywood be famokarana koa izy ( Ny fisarahana, lehilahy vy) . Arakaraka ny ahafantaranao!
Mifandraika: Ny sarimihetsika Krismasy 25 tsara indrindra, laharana
Sokajy Indian Dia Singam-Bolo Fahasalamana Ara-Tsaina
ny fomba fanamboarana ny fakan'ny volo amin'ny fomba matanjaka
fanatanjahan-tena aerobika hampihenana ny tavy kibo
bras ho an'ny nono kely
miampy habe Maxi akanjo
ny fomba hampihenana ny volo latsaka amin'ny fitsaboana ao an-trano